Tani waxay runtii ka cadhaysiin kartaa qaar ka mid ah dadka warshadahayda, laakiin shirkado badan ayaa si fudud u haysan nooc ka caawiya maalgelinta goobaha la geeyo iyo istaraatijiyad suuq-geyneed oo ballaaran. Waan ogahay ganacsiyo yar yar oo wali albaab-ilaa-albaab u taga ama ku tiirsan hadalka-afka si ay u taageeraan ganacsi cajiib ah. Goobaha Taleefanada: Bilaabida Bogagga Daqiiqado gudahood Ganacsi kastaa waa inuu isku dheelitiraa wakhtiga, dadaalka, iyo maalgalinta mulkiilaha si uu u soo saaro habka wax iibsiga ugu hufan si uu u keeno
Fiidiyowga Hippo: Kor u Qaadida Heerarka Jawaabta Iibka ee Iibinta Fiidiyowga
Arbacada, Nofeembar 24, 2021 Arbacada, Nofeembar 24, 2021 Douglas Karr
Sanduuqa-galahaygu waa khariban, gabi ahaanba waan aqbali doonaa. Waxaan leeyahay xeerar iyo faylal caqli-gal ah oo diiradda saaraya macaamiishayda oo wax kasta oo kale ayaa ku dhaca jidka dhinaceeda ilaa ay dareenkayga soo jiidato mooyaane. Goobaha iibka qaarkood ee muuqda waa iimaylo muuqaal ah oo la ii soo diray. In aan arko qof si gaar ah iila hadlaya, oo u fiirsada shakhsiyadiisa, oo si degdeg ah u sharxaya fursadda ay ii bannaan tahay waa mid soo jiidasho leh… waxaanan hubaa in aan wax badan ka jawaabo.
Isniin, November 22, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
LeadPages waa bogag degitaan ah oo kuu ogolaanaya inaad daabacdo qaabaysan, bogag degitaan oo jawaab leh oo wata koodka aan lahayn, jiidi & tuurista wax-dhisaha dhawr dhagsi oo kaliya. Bogagga LeadPages, waxaad si fudud u abuuri kartaa boggaga iibka, albaabada soo dhawaynta, boggaga degista, boggaga bilawga ah, boggaga tuujin, bogag dhawaan bilaabi kara, bogag mahadsanid, bogag gaadhi hore, bogag kor u qaadaya, bogag aniga igu saabsan, bogag taxane waraysi ah iyo in ka badan… 200+ oo la heli karo. Bogagga Lead-ka, waxaad awooddo: Abuur joogitaankaaga onlaynka ah - abuur
Jimco, Juun 4, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr